သံလွင်: မော်တော်ယာဉ်လိုင်စဉ်များ ထုတ်ပေးရာတွင် မသမာမှုများ ရှိနေ
မော်တော်ယာဉ်လိုင်စဉ်များ ထုတ်ပေးရာတွင် မသမာမှုများ ရှိနေ
မန္တလေးတိုင်း၊ မြင်းခြံမြို့တွင် လိုင်စင်မဲ့ မော်တော်ယာဉ်များအား လိုင်စင်ထုတ်ပေးမှုတွင် မသမာမှုများ ဖြစ်ပေါ်နေကြောင်း ဒေသခံများက ပြောသည်။ မြင်းခြံမြို့ပေါ်တွင် လိုင်စဉ်မဲ့ယာဉ်များကို မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနနှင့် ကုန်းလမ်းညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန (ကညန) တို့က ယခုလ ၁၄ ရက်နေ့မှ စတင်ကာ ယာဉ်လိုင်စင်များ ပြုလုပ်ပေးနေခြင်းဖြစ်ပြီး ယာဉ်အမျိုးအစားအပေါ် မူတည်ကာ လိုင်စဉ်အတွက် ကျပ်ခြောက်သောင်းမှ တစ်သိန်းအထိ ပေးနေရကြောင်း သိရသည်။
ထိုသို့ လိုင်စဉ်ပြုလုပ်ပေးရာတွင် လာရောက်ပြုလုပ်သူ များလွန်းသည့်အတွက် နေရာတန်းစီမှုတွင် မသမာမှုများ ဖြစ်ပေါ်နေကြောင်း မြင်းခြံမြို့ခံတဦးက ပြောသည်။
“နေရာမှောင်ခိုတန်းစီပြီး နေရာဦးထားတဲ့လူတွေက ပိုင်ရာဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်တွေနဲ့ပေါင်းပြီး ရောင်းစားနေကြတယ်။ တစ်နေရာကို တစ်သောင်းခွဲပေးရတယ်။ အဲဒီလို နေရာမှောင်ခို ရောင်းစားနေတဲ့လူတွေက ခါးကြားမှာ ဓားတွေထိုးထားပြီး ခြိမ်းခြောက်တယ်” ဟု အဆိုပါ မြို့ခံက ပြောသည်။
ထိုကဲ့သို့ မသမာမှုများ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းကို မြို့နေလူထုက မကျေနပ်သည့်အတွက် မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးမှူး ဗိုလ်ကြီး ကျော်သိန်းထံ သွားရောက်တိုင်တန်းခဲ့သော်လည်း ပြေလည်မှုမရှိခဲ့ပေ။
“အခွန်ဦးစီးမှူး ဗိုလ်ကြီး ကျော်သိန်းကို သွားတိုင်တယ်။ ဒီလိုတွေ လုပ်နေတယ်။ ဒီလိုတွေ ဖြစ်နေတယ် ဆိုတာကို။ အဲဒါ သူက ဘာပြောလဲဆိုတော့ ‘ငါနဲ့မဆိုင်ဘူး၊ ငါ့မှာ အဲဒီအတွက် တာဝန်မရှိဘူး’ လို့ တာဝန်မဲ့စကား ပြောလွှတ်လိုက်တယ်” ဟု မြို့ခံက ဆက်ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် လက်ရှိအစိုးရ ခေါင်းဆောင်များက ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ လုပ်ဆောင်နေကြောင်း၊ ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ် အရှိန်အဟုန်နှင့် သွားနေပြီဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုနေသော်လည်း အစိုးရဌာနများမှ ဌာနဆိုင်ရာ အောက်ခြေဝန်ထမ်းများ၏ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုများမှာ ရှိမြဲအတိုင်း ဆက်လက်ရှိနေသေးကြောင်း အများက ဝေဖန်နေကြသည်။
at 7/14/2012 12:28:00 AM
▼ 07/08 - 07/15 (193)
မြန်မာနိုင်ငံမှာ မြုပ်နှံမှုအတွက် အမေရိကန် အမတ်တွေက...
အစိုးရတပ်မှ ကလေးစစ်သား ၅ ဦး KIA ထိန်းသိမ်းထား
ဂျကာတာမြို့ မြန်မာသံရုံးရှေ့မှာ မွတ်စလင် အဖွဲ့ဝင်ေ...
မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၁၄-၇-၂၀၁၂ )- ထွန်တုံးတိုက...
မီးရထား အခြေခံအလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်း စတင်ထူထောင်
ဘယ်လမ်းရွေးမလဲ. . . KIA
မော်တော်ယာဉ်လိုင်စဉ်များ ထုတ်ပေးရာတွင် မသမာမှုများ ...
လျှပ်စစ်မီးရရှိရန် ပြည်မြို့ ဒုတိယနေ့ဆန္ဒပြမှု ရိုက်...
ဆန္ဒပြခွင့်အတွက် စာတင်သည့် လယ်သမားများအား ဒေသအာဏာပိ...
လမ်းအူကြောင်းဖောက်လို့ လယ်မြေဧက (၅၀၀) ကျော် လယ်သမာ...
NLD ရဲ့ ထိပ်တန်းကိစ္စသုံးရပ်နဲ့ ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ရဲ...
ရဲတဦးလက်ချက်ဖြင့် ကျောင်းသားတဦး သေဆုံးခဲ့သည့်အမှု...
အသက်မပြည့်သေးသည့် ကလေးစစ်သားတဦး တပ်မှထွက်ခွင့်ရရန...
အာဏာပိုင်များက အာဇာနည်နေ့တွင် လွမ်းသူ့ပန်းခွေချခွင...
ရခိုင်၌ ဖမ်းဆီးထားသည့် ကုလသမဂ္ဂ ၀န်ထမ်းများ ရုံးထုတ...
ဦးဘရန်ရှောင်၏ ဒဏ်ရာများ ဓာတ်ပုံ မှတ်တမ်းယူခွင့် တ...
သမ္မတ ကမ်းလှမ်းချက် UNHCR လက်မခံ
ကယား(ကရင်နီ)ပြည် တိုးတက်ရေး လူထုကြား ပြေလည်နိုင်တဲ...
ကျောက်ဖြူမြို့ ပြင်ဖြူမော်ရွာမှ ကျောင်းသူတစ်ဦးအား...
စစ်သုံ့ပန်းများကို လက်ခံပေးရန် KIA ပန်ကြားနေ
မြောက်ဦးလူထု အာဏာပိုင်များနှင့် ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြ...
ချဲလ်ဆီး ကစားသမား ဂျွန်တယ်ရီနှင့် လူမျိုးရေးခွဲခြာ...
၃ နှစ်လောက် သည်းခံပေးပါ
ဦးဝင်းတင်ဖောင်ဒေးရှင်း တတိယအကြိမ် ထောက်ပံ့ငွေပေးအပ...
၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ၌ အချိုးကျကိုယ်စားလှယ်စနစ် အသုံြး...
လက်မှတ်မရှိသော အလုပ်သမားတစ်ရာကျော် ချုံဖော်တွင် ထေ...
ဦးသိန်းစိန်နှင့် ဟီလာရီကလင်တန် ပိတ်ဆို့မှု ရုပ်သိမ်...
မြန်မာ သမ္မတ ၏ ရိုဟင်ဂျာ လက်မခံ သည့် သတိပေး ချက် ကိ...
ရခိုင်ပဋိပက္ခနှင့် ပတ်သက်၍ ပြဿနာဖြစ်ခဲ့သော လူမျိုးန...
ဆူဇူကီး ခြေစစ်ပွဲစဉ်များ မြန်မာက အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်...
၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်တွေ ဟာ စစ်တွေမြိ...
NGOs ၃၁ ဖွဲ့၏ မြန်မာ လ.၀.က ဥပဒေပြင်ဆင်ဖို့ တောင်းဆ...
ဂျာနယ်နှစ်စောင် ပိတ်သိမ်းခံရမည်ဟု သတိပေးခံရ
မန္တလေးမြို့လယ်တွင် လောင်စာဆီဆိုင် မဖွင့်ရေး ကန့်ကွ...
သမဂ္ဂ မဖွဲ့နဲ့၊ အသင်းပဲဖွဲ့
မြန်မာ မီဒီယာ ဘာလဲ ဘယ်လဲ ဆွေးနွေးပွဲ
ဒု ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဝေလွင် ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်...
သစ္စာ​စောင့်​သိသည့်​ အတိုက်ခံအဖွဲ့​မျိုး​ အမြင်ဖြင်...
အကျင့်ဆိုး ၊ စရိုက်ဆိုးနဲ့ အုပ်ချုပ်နေတဲ့ ကျေးရွာအ...
အိုလံပစ်အားကစားပွဲကြောင့် နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရေး တ...
ပူးပေါင်းကြ...၊ ညီညွတ်ကြ...၊ လက်ချင်းချိတ်ကာ ခိုင်...
အလုပ်သမားသမဂ္ဂဖွဲ့ဖို့ ပန်းချီကားရောင်းပြီး ရန်ပုံေ...
တိရစ္ဆာန်ရုံမှာ ကျားကိုက်လို့ တဦးသေဆုံး
ကချင်ပြည်နယ်က သင်္ချိုင်းမြေ အခက်အခဲ
ရိုဟင်ဂျာအရေး သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ သဘောထား
"သဘောထား အတင်းမာဆုံးသူ" __လူထုစိန်ဝင်း
ဘင်္ဂလားဘက်မှ ရခိုင်ရွာများ ကိုယ်တိုင် လုံခြုံရေး ယူ...
ထိုင်း BGH က မြန်မာပြည်တွင် ဆေးရုံဖွင့်ရန် လေ့လာမည...
မန္တလေးဟိုတယ် အများစု ကြယ်ပွင့်အဆင့် မသတ်မှတ်နိုင်ေ...
၀န်ကြီး ဦးအောင်မင်းနဲ့ ၈၈ အဖွဲ့ တွေ့ဆုံ
ဥပဒေဘောင် အတွင်းမှ လူကုန်ကူးမှုများ ရန်ကုန် မြို့လယ...
ဓမ္မစေတီ ခေါင်းလောင်းကြီး ၏ သမိုင်းစုံ
ဖူးတွေ့ခွင့်ရတော့မည့် သမိုင်းတန်ဖိုးကြီးမားလှသောေ...
မွန် မြန်မာ သျှမ်း သုံးပွင့်ဆိုင် အားပြိုင် မှုကြီး...
G20 စည်းဝေး သြစီမှာ ပထမဆုံး အကြိမ် ကျင်းပမယ်
ဘိလပ်မြေ လုပ်ငန်း၌ ပြည်ပ ကုမ္ပဏီကြီးများ ရင်းနှီးြ...
အာရှ-ပစဖိတ် ဒေသအတွင်း အမေရိကန်ရဲ့ စစ်ရေး ဆိုင်ရာ မ...
လွန်ဆွဲနေသော အစိုးရနှင့် KIO တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပွဲ
၀န်ကြီး နေရာ အပြောင်းအလဲ
မင်းကိုနိုင်ရဲ့ နောက်ကြည့်မှန် စာအုပ်ထွက်မည်
မြောက်ကိုရီးယား ဆံတိုမလေးက ဘယ်သူလဲ
တာချီလိတ်က အခွန်မှူး ဘာဖြစ်သလဲ ???
ရခိုင်တွင် ညမထွက်ရအမိန့် မနာခံသူ ၃၀ ကျော် အဖမ်းခံရ...
သာသနိကအဆောင့်အဦးအား အဓမ္မ လုယူနေ
မစိုးရိမ်ဆရာတော် ဦးဝီရသူနဲ့ ၈၈ အဖွဲ့တို့ စစ်တြွေ...
အာဇာနည် ဗိမာန်အား ပြန်လည် မွမ်းမံလို
ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေး နည်းပညာတက္ကသိုလ်များ အဆင်မြှင့်...
US သံအမတ် ရန်ကုန်ရောက်ပြီ၊ နေပြည်တော်သို့ သုတ်ခြေတ...
၂ နှစ်သား ပြည်သူ့ခေတ်
ဖေ့စ်ဘုတ်သုံးခြင်း ဘယ်လိုလူတွေ ဆင်ခြင်သင့်လဲ ???
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို Churchill ဆု ချီးမြှင့်